कपाल नबढेर चिन्तित हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् छिटो कपाल बढाउने उपाय – Hamro Nepali Samachar
Home/ स्वास्थ्य/कपाल नबढेर चिन्तित हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् छिटो कपाल बढाउने उपाय
सबै महिलाहरूलाई आफ्नो कपाल लामो र सुन्दर बनाउन मन पर्छ । तर चाहेर पनि बनाउन सकिरहेका हुँदैनौ । हामीले आफ्नो शरीरमा जुन चिज प्रयोग गर्छौ उसको प्रभाव हाम्रो कपालमा पनि पर्न सक्छ । कपाल राम्रो गराउनु भन्दा पनि पहिला झर्न रोक्नु पर्छ ।
कपाल लामो बनाउने घरेलु उपायहरुमा :